people Nepal » पुरानो मिति राखेर ११ जिल्लाका सीडीओ सरूवा, कहाँ को ? पुरानो मिति राखेर ११ जिल्लाका सीडीओ सरूवा, कहाँ को ? – people Nepal
पुरानो मिति राखेर ११ जिल्लाका सीडीओ सरूवा, कहाँ को ?
२१ जेठ, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सहित ११ सहसचिव र १५ उपसचिवको सरुवा गरेको छ । नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा गृहले पुरानो मिति राखेर शुक्रबार सरुवा गरेको हो ।